Waa maxay cufisjiidadka: sifooyinka, cilmi-baarista iyo muhiimadda | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 18/11/2021 10:00 | Ciencia
La cufnaanta waa xoogga soo jiidanaya shayada cufnaanta midba midka kale. Xooggeedu wuxuu ku xiran yahay cufnaanta shayga. Waa mid ka mid ah afarta is dhexgalka aasaasiga ah ee loo yaqaan 'matter', waxaana sidoo kale loogu yeeri karaa "is-jiidjiid" ama "isdhexgalka cufisjiidad." Cufisjiidku waa xoogga aan dareemeyno marka dhulku u soo jiido walxaha ku hareeraysan oo uu u soo jiito xaruntiisa, si la mid ah xoogga keena in walxuhu soo dhacaan. Waxay kaloo mas'uul ka tahay meereyaasha ku wareega qorraxda, inkastoo ay ka fog yihiin qorraxda, haddana waxay soo jiidanayaan cufnaantooda.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa waxa uu yahay cufisjiidka, maxay yihiin sifooyinka iyo muhiimada uu leeyahay.
1 Waa maxay cuf-jiidadka iyo sida lagu ogaaday
2 Unugyada Cabbirka
3 Waa maxay cuf-jiidadka makaanikada qadiimiga ah
4 Marka loo eego makaanikada is-bedelka iyo makaanikada quantum-ka
Waa maxay cuf-jiidadka iyo sida lagu ogaaday
Xoogga xooggani waxa uu la xidhiidha xawaaraha meerayaasha: meerayaasha qorraxda ugu dhow waa kuwa dheereeya iyo meerayaasha ka fog qorraxda ayaa gaabis ah. Taasi waxay ku tusinaysaa in cufisjiidku yahay xoog, inkasta oo uu saameeyo shay aad u waaweyn xataa masaafo dheer, haddana xooggiisu wuu yaraadaa marka ay walxuhu ka fogaadaan.
Aragtida kowaad ee cufisjiidka waxay ka timid faylasuufkii Giriigga ahaa ee Aristotle. Laga soo bilaabo markii ugu horeysay, bini'aadamku waxay fahmeen in marka aysan jirin xoogag iyaga ilaalinaya ay arrimuhu burburaan. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd ilaa qarnigii XNUMXaad ee BC. C. in daraasaadka rasmiga ah ee ciidamada "soo dejin lahaa" ay bilaabeen. C, markii faylasuufkii Giriigga Aristotle uu qeexay aragtidii ugu horreysay.
Fikradda guud, dhulku waa udub dhexaadka caalamka iyo, sidaas darteed, jilitaanka xoogga aan la arki karin, kaas oo soo jiidanaya wax kasta. Xooggan waxa loo yaqaannay "Gravitas" waagii Roomaanka, wuxuuna la xiriiri jiray fikradda miisaanka, sababtoo ah ma kala saarin miisaanka iyo cufnaanta walxaha wakhtigaas.
Aragtiyahan waxaa markii dambe si buuxda u beddelay Copernicus iyo Galileo Galilei. Si kastaba ha ahaatee, Isaxaaq Newton waa kan la yimid ereyga "gravitation." Waagaas waxaa la sameeyay isku daygii ugu horreeyay ee rasmi ah oo lagu cabbirayo cuf-jiidadka, waxaana la sameeyay aragti la yiraahdo sharciga cuf-isjiidadka caalamiga ah.
Cufisjiidka waxaa lagu qiyaasaa saameyntiisa, taas oo ah dardargelinta aad ku daabacdo walxaha dhaqaaqa, tusaale ahaan, walxaha dayrta xorta ah. Dusha sare ee dhulka, dardargelintan waxa lagu xisaabiyaa qiyaas ahaan 9.80665 m/s2, tiradani waxa laga yaabaa inay wax yar ka duwanaato iyadoo ku xidhan goobta juquraafi ahaan iyo jooggayaga.
Waxay cabbirtaa dardargelinta shay soo jiitay shay kale oo ka weyn.
Iyadoo ku xiran waxaad rabto inaad barato, cuf-jiidadka waxaa lagu cabbiraa laba cabbir oo kala duwan:
Xoog: Marka la cabbiro xoog ahaan, Newton (N) ayaa la isticmaalaa, oo ah unug ka mid ah Nidaamka Caalamiga ah (SI) ee lagu sharfayo Isaac Newton. Cufisjiidku waa xoogga la dareemo marka shay uu mid kale soo jiito.
Dardargelinta Xaaladahan, cabbir dardargelinta la helay marka shay uu soo jiito shay kale. Sababtoo ah waa dardargelin, cutubka m/s2 ayaa la isticmaalaa.
Waa in la ogaadaa in marka la eego laba walxood, cufisjiitada shay kastaa uu dareemo isku mid sababtoo ah mabda'a ficilka iyo falcelinta. Farqiga ayaa ah dardargelinta, sababtoo ah cufnaanta ayaa ka duwan. Tusaale ahaan, xoogga uu dhulku ku sameeyo jidhkeenna waxa ay la mid tahay xoogga uu jidhkeenu ku sameeyo dhulka. Laakiin sababtoo ah cufnaanta dhulku aad ayey uga badan tahay tirada jirkeena, dhulku ma dardargelin doono mana dhaqaaqi doono haba yaraatee.
Waa maxay cuf-jiidadka makaanikada qadiimiga ah
Cufisjiidadka waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la isticmaalayo sharciga Newton ee cufjiidadka caalamiga ah. Cufis-jiidad ee makaanikada qadiimiga ah ama Newtonian waxay raacdaa qaacidada la taaban karo ee Newton, taas oo ka shaqaysa xoogagga iyo walxaha jidheed ee loo baahan yahay in la tixraaco. Cufisjiidkan waxay ku ansaxaysaa nidaamyada indho-indheynta aan tooska ahayn, kuwaas oo loo arko inay caan ku yihiin ujeedooyinka cilmi-baarista.
Marka loo eego makaanikada qadiimiga ah, cuf-jiidadka waxaa loo go'aamiyaa sida:
Xoog mar walba soo jiidasho leh.
Waxay ka dhigan tahay baaxad aan xad lahayn.
Waxay muujineysaa xoogga qaraabada ee nooca xarunta.
Mar kasta oo ay u dhowdahay jidhka, way sii weynaataa xoojinta, iyo inta u dhow, waa daciifnimada xoogga.
Waxa lagu xisaabiyaa iyadoo la isticmaalayo sharciga Newton ee cufisjiidka caalamiga ah.
Sharcigan dabiicadda ah ayaa muhiimad weyn u leh daraasadda dhacdooyin badan oo dabiici ah oo adduunka iyo caalamkaba ah. Aragtida Newton ee cuf-jiidadka caalamiga ah waxa ay ahayd oo ay tixgeliyeen physicists British ah. Si kastaba ha ahaatee, aragtida ugu dhamaystiran ee cuf-isjiidadka waxaa soo jeediyay Einstein aragtidiisa guud ee caanka ah ee isu-celinta.
Aragtida Newton waa qiyaasta aragtida Einstein, taas oo muhiim u ah marka la baranayo gobolka hawada sare ee uu cufisjiishu aad uga weyn yahay waxa aan la kulanno Dhulka.
Marka loo eego makaanikada is-bedelka iyo makaanikada quantum-ka
Marka loo eego makaanikada is-bedbeddelka leh, cufisjiidku waa natiijada qallafsanaanta wakhtiga-space-time. Farsamoyaqaannada relativistic ee Einstein wuxuu jebiyey aragtida Newton meelo gaar ah, gaar ahaan kuwa lagu dabaqi karo tixgalinta goobta. Maaddaama caalamka oo dhami uu dhaqdhaqaaq ku jiro, shuruucda qadiimiga ahi waxay luminayaan ansaxnimadooda fogaanta u dhaxaysa xiddigaha mana jirto meel caalami ah oo deggan.
Marka loo eego makaanikada is-bedbeddelka ah, cufisjiidku kuma jiro si fudud is-dhexgalka labada shay ee waaweyn marka ay isku dhow yihiin, laakiin taasi waxay sabab u tahay cilladda joomatari ee waqtiga-space-ka ee ay keento cufnaanta weyn ee xiddigta. Taas macnaheedu waa cufisjiidku wuxuu xitaa saameyn karaa cimilada.
Hadda ma jirto aragti cufan Sababtu waxa weeye fiisigiska subatomic particle physics-ka Quantum physics ka uu wax ka qabanayo waxa uu aad uga duwan yahay xiddigaha aadka u waaweyn iyo aragtida cuf-jiidadka ee isku xidha laba adduun (quantum and relativistic).
Aragtiyo ayaa la soo jeediyay in la isku dayo in tan la sameeyo, sida loop quantum gravity, aragtida superstring ama torsion quantity theory. Si kastaba ha ahaatee, midkoodna lama xaqiijin karo.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto waxa cufisjiishu yahay iyo muhiimada ay u leedahay sayniska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Waa maxay cufisjiid